Akasha yakasarudzika social network yakavakirwa paEthereum neIPFS | Linux Vakapindwa muropa
Akasha yakasarudzika social network yakavakirwa paEthereum neIPFS
Ese makuru eruzhinji midhiya mapuratifomu akapa vashandisi nzira yekutaurirana nevamwe, sevateveri, traffic kune kwavo zvemukati, zvavanofarira, uye retweets.
Zvino, chizvarwa chitsva chemagariro enhau mambure chakabuda, icho chinoshandisa blockchain tekinoroji kugadzira mapuratifomu anotendera vashandisi kudzora dhata ravo uye kupukunyuka kumisikidzwa kunoitwa nevashandisi vakaita saFacebook neTwitter.
1 About Akasha
2 Akasha zvakanakira
2.1 Tora Akasha
Imwe yeaya matsva enhau enhau mapuratifomu ndiAkasha ndiyo inotevera chizvarwa pasocial media network, mauri maungaite chero chiitiko chinotenderwa pasocial network sekushambadzira, kugovana, kuvhota zvemukati nezvimwe.
Kusiyana neanozivikanwa masocial network muAkasha, zvemukati zvinoburitswa kuburikidza nehutongi hwehutongi panzvimbo pemaseva epakati.
Rusununguko rwekutaura, kuwana ruzivo uye zvakavanzika kodzero dzakakosha dzevanhu izvo zvinofanirwa kuremekedzwa zvese paInternet uye muhupenyu chaihwo.
Sebudiriro mukuchinjika kune yeruzivo-yakavakirwa nzanga, iyo yekupedzisira chengetedzo yeruzivo kune ramangwana chizvarwa idambudziko rakakomba rinofanirwa kugadziriswa.
Chinangwa cheAkasha Project ndechekumisikidza chigaro chisingaperi chakaiswa muInternet network kune ruzivo rwese rwunogadzirwa online.
Ruzivo (mawebhusaiti, zvinyorwa, maemail mafaera, mavhidhiyo, nezvimwewo) zvinogona kubviswa nemaune nehurumende uye / kana makambani anodzora Internet nhasi kana zvakapusa asi zvakaenzana zvinosiririsa, zvinongonyangarika nekuda kwekushaikwa kwekuchengetedzwa kwepakati pekubata maseva.
Dambudziko iro purojekiti iri kuda kugadzirisa nderekugara kweruzivo online.
Muchokwadi, Internet yanhasi iri kuve yepakati, nemabhirioni evashandisi zvinoenderana nechero mashoma masevhisi makuru.
Indaneti yanhasi zvakare haina kusimba, nekuti yakavakirwa pane yepakati yekuparadzira modhi, nemaseva ari kuuya nekuenda.
Kana sevha ikamira kushandira chero hunyanzvi hwekuita kana hwekutengesa chikonzero, kana kubviswa nezviremera, ese mapeji ewebhu akachengetwa pane iro server anonyangarika.
Sechishandiso chakatemerwa, AKASHA inoshandisa inotevera-chizvarwa ruzivo ruzivo rwakazvarwa kubva mukubatana kweEthereum.
Uye iyo Inter-Planetary File System (IPFS) iyo inogoverwa peer-to-peer faira system iyo inosanganisa ese anotora node kune imwecheteyo faira system uye inobvumira kuumbwa kweiyo yakashandurwa faira masystem, blockchains, kunyangwe webhu inogoverwa zvachose.
Pazvikamu zvakanaka zvechirongwa ichi zvinogona kusimbiswa ndezvi:
Iyo purojekiti yakagadzira vanogadzira uye vanachipangamazano vanoshanda pairi, kusanganisira ivo vatangi veEthereum.
Akasha inzvimbo yakasarudzika pasocial network uko data uye kuzivikanwa kunoiswa pasi uye kwaunoteedzera vashandisi uye uine chinyorwa chenhau chakanangana nezviri mukati.
Iyo purojekiti yakavhurwa sosi. Uye ichave iri bhenji kune mamwe akawanda Ethereum-based dapps.
Kana iyo purojekiti ichitarisa nyaya, saka Akasha uyu anogona kuve chigadzirwa chakanakira vamwe vashandisi vechitatu-bato kuti vashandise.
Basa rakaomarara rakabatana nekubatanidza Ethereum smart contract neIPFS uye zvimwe zvishandiso zvinoonekwa uye yakakura kwazvo.
Vakavamba vakafunga kutanga vagadzira chinoshanda chigadzirwa vasati varonga ICO. Iri zano riri nani pane mamwe makambani ari kuronga ICO zvisati zvagadzirwa zvigadzirwa. Izvi zvinokupa kutendeseka kwakanyanya mune zvakaratidzwa uye negwara reiyo Akasha chigadzirwa.
Akasha inogona kutorwa pasi se desktop application, asiwo inogona kushandiswa kuburikidza nebrowser.
Nekudaro, kana ivo vari kuzoshandisa iyi social network, Seyambiro yatinogona kukupa iwe kuita yekuchengetedza kopi yemaphasiwedi ako uye / kana mapassword kubvira kana yako account yagadzirwa, kana usina, hapana nzira yekuitora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Akasha yakasarudzika social network yakavakirwa paEthereum neIPFS
Volcanoids: iyo yekupona yevhidhiyo mutambo ine yekuvandudza yeLinux
FastoTV, yemahara uye yakavhurwa sosi IPTV chikuva